I-Megahertz yokubonisa i-One-of-Kind, I-IP OB Truck ku-IBC 2019 - NAB Bonisa Izindaba nge-Broadcast Beat, Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-Megahertz yokubonisa i-One-of-Kind, I-All OB IP iloli ku-IBC 2019
Ukwakhiwa nokudilizwa yi-Megahertz, i-XLUMX-tonne yokunethezeka kwe-OB entsha ye-Spiritland izothatha isikhungo esisezingeni le-IBC
I-London, UK, 19 Julayi, i-2019: I-Megahertz Ltd, umlingani othembekile wezinhlelo zokuhlanganiswa neminyaka yokuhlangenwe nakho ekuhlinzekeni izindleko eziphumelelayo, imiklamo yokucabanga kanye nezixazululo zezinhlelo zokusebenza ezihleliwe neziphathekayo, izobonisa uhlobo lwe-Spiritland Productions 'olulodwa, uhlobo olukhulu, umsindo ohambisanayo kanye nevidiyo ngaphandle ukusakaza (OB) iloli ekumekeni kwe-IBC i-12.F20, phakathi kwe-13-17 Septemba, i-2019 (i-Rai, i-Amsterdam, e-Netherlands).
Ngokusekelwe ebhokisini le-8.5m-isidumbu sikaMercedes Benz Antos esicinile kanye nokuqeqeshwa komsebenzi okwenziwa yiSpectra Specialist Engineering Ltd., iloli le-Spiritland Productions 'bespoke liqukethe ingqalasizinda ye-IP ekugcineni. Umsindo usebenza ngokuphelele kwi-Dante Network, okuyiyona inqamulela ngempela i-OB yale ncazelo nosayizi. Iloli yi-Dolby Atmos enamandla futhi yenzelwe ngokubambisana ne-Dolby ukuze inikeze ngokuqapha okungcono kakhulu nokuxuba imvelo yomculo obukhoma.
I-Megahertz-eyakhelwe imoto yokukhiqiza ephathekayo ebizwa ngokuthi i-Megahertz, eyayibizwa nge- 'Spiritland One', yathunyelwa kuchwepheshe wezokusakaza obala ekuqaleni kukaJuni, futhi yahamba emgwaqeni ngemuva kwesonto elilodwa lokuhlolwa okuphumelelayo, elihlanganisa isonto lamabonakude avulekele ithelevishini nakwasakazo ku-BBC4 , I-BBC Radio3 ne-BBC Radio Wales yeCardiff Singer ohloniphekile we-World Competition. Ukusuka lapho kwasetshenziswa njengesikhungo sokuxuba ukukhiqizwa kwekhonsathi yekhonsathi enkulu ye-BBC Radio2, futhi ngesikhathi sokubhala, sisetshenziselwa ukurekhoda futhi ixubane ne-Burt Bacharach ekhonsathini ekhethekile eHammersmith Apollo.
"Into esiyithokozisa kakhulu ngokusebenza noMegahertz ukucacisa nokuqaphela imininingwane yabo, kanye nolwazi lwabo kanye nokucaca uma kuziwa ezincomo nokuqondiswa kwabakhiqizi. Babefuna ngempela ukuthi senze ingxenye enkulu yokutshalwa kwezimali kwethu, "kusho uGareth Iles, umqondisi osungula uMoyaland Productions. "Ukuba neloli esebenza ekupheleni kwengqalasizinda ye-IP kusebenza ngokuphumelelayo, hhayi kuphela ngokunciphisa inani lemishini esisebenza ngayo, kodwa futhi ngesikhathi esilondolozwe endaweni esivumela ukuba sigxile amandla ethu ukudala umkhiqizo ozwakalayo ozwakalayo. "
Ukudweba okuhlangenwe nakho kweqembu elikhulu le-OB elikhulu, i-Spiritland Productions iceliwe phezulu kwezinto ezihamba phambili zeloli, kufaka phakathi i-SSL System T yokusakaza ideskithophu yokukhiqiza yomsindo ne-console, izikhulumi ze-Barefoot ne-KH yezinhloli ze-Neumann. Imoto ihamba nge-128 SSL mic amps njengendlela evamile, uhlelo lwe-Optocore esiteji olugijima kokubili inethiwekhi yezokuxhumana ye-Dante ne-Riedel Bolero, kanye nama-MADIs ayisishiyagalolunye angakwazi ukuxhunyiwe ngqo kumadivayisi ukuze kulungiswe kabanzi.
"Sinezinhlamvu ze-18 ezizodlala nazo futhi ezingavamile, ngeloli elilalelwayo elingu-OB, iningi lesisindo lilingana nokufakaza okuzwakalayo. Uma ngabe sizama ukufezekisa lokhu ngobuchwepheshe bendabuko, izakhiwo zaziyobe zibiza u-50% ngaphezulu, futhi ngabe ngabe sidinga isikhala esiningi. Ubuchwepheshe obuse-IP ngumshintsho wegeyimu futhi ekukhetheni ukulingana noMegahertz, siyaqiniseka ukuthi iloli lizoqhubeka ligcwalisa izidingo zobuchwepheshe nezesipiliyoni kokubili manje namakhasimende ethu esikhathini esizayo. "
Ukukhiqizwa kwe-Spiritland okungapheliyo, njengabachwepheshe emkhakheni wabo, kubonise ngokucacile mayelana nokukhethwa kwemishini nokuhlelwa kwemishini, kubandakanya yonke ingqalasizinda ye-IP nezikhundla ezisebenzayo ngaphakathi kweloli. Kodwa-ke, ukusebenzisa ngokugcwele ukubonisana kukaMegahertz, ukuklama nokwakha izinsizakalo, ukubambisana kuye kwazuza okuvelele kokubili kokubili.
"Lezi zinhlobo zamaphrojekthi, lapho inkampani yokukhiqiza icabanga ngokugcwele nge-ergonomics yemoto, imvelo yokusebenza, izimpawu ezihlaza okwesibhakabhaka, umkhiqizo nesitayela, ngaphezulu kwe-technical spec," kusho uJon Flay, umqondisi wokuphatha, uMegahertz. "Siyahlonishwa ukuba ngumlingani oyinhloko kulokhu okusebenzayo noMoya wezeMveliso."
Ngomlando we-Spiritland Productions owasekelwe ngokuqinile emakilasini angama-movie aqoshwayo e-Centralland, i-aesthetics yeloli yayibucayi.
I-Spiritland Productions yasebenza noMegahertz nomqeqeshi, i-Spectra Specialist Engineering Ltd., ukucubungula ngokucophelela nokufaka izinto eziphathekayo eziphezulu kanye nezinto zokunethezeka emotweni, ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo uhlangabezane nokulindela kanye nobubanzi bezimenywa eziphezulu ezihambelanayo besebenzisa lesi sakhiwo kokubili manje esikhathini esizayo. Ukuze ukwandise ukusebenza kwendawo yangaphakathi, ukuhlelwa kwenzelwe ukufaka isfafa esithintekayo netafula endaweni yokuhlala yezivakashi, okwenza isikhala sibe ngcono kakhulu ngokukhulisa usayizi wayo - futhi unikeza ikhono lokungeza ukuxuba ividiyo uma kunesidingo.
Imikhiqizo ye-Spiritland isivele iqukethe i-2019, futhi ngonyaka wayo wokuqala emgwaqeni wonke i-IP OB iloli kulindeleke ukuthi ihlanganise eminye imikhosi ephezulu kakhulu ye-UK kanye namakhonsathi kokubili ithelevishini nomsakazo bukhoma, kanye nokungenisa izivakashi ezinkulu izenzakalo eYurophu.
Ukuze uhlangabezane ne-Spiritland One inkazimulo yayo egcwele, sicela uvakashele i-IBC stand 12.F20 (i-Rai, i-Amsterdam 13-17 Septemba).
I-Megahertz ithembelwa ngabasakazo abahola phambili emhlabeni, abanikazi bokuqukethwe nabanikeli bezinsizakalo zabezindaba ukuklama, injini futhi ngokuqhubekayo bakhipha izinhlelo eziphezulu ezihleliwe nezinhlelo zokusebenza zokuvula izinkinobho. Njengendlela yokufaka izinhlelo ezihamba phambili embonini ephakathi kokuguqula amafomethi amasha amaningi, kufaka phakathi i-4K, i-8K, i-UHD, i-Cloud kanye ne-IP-based workflows; ithimba layo lobuchwepheshe labanjiniyela abanekhono kanye nezakhi zamasombululo, lithathwe kokubili okusakazwa kanye nezizinda ze-IT futhi zizinikele ekuqinisekiseni ukuthi indlela yokucabangela, yokucabangela nokuphumelela kakhulu ithathwa emisebenzini yendabuko kanye neyokusika.
Ukuxosha imingcele ukuthola izixazululo ezifanele kumakhasimende ayo ngokugxila kwikhwalithi nokuqinisekiswa kwezindleko, i-Megahertz inikeza izinhlelo eziguquguqukayo nezixhasayo ezilinganisela izinselele zomkhakha wezobuchwepheshe nezokuhweba ezibhekene nabanikazi nabasebenzisa lezo zakhiwo njengokukhiqizwa kwezindaba nezemidlalo amasayithi, ama-studio ase-state-of-the-art, izikhungo zokusebenza zenethiwekhi, izakhiwo zemfundo, nezinqola ezingaphandle kwezokusakaza / ezokuthutha izindaba.
Ukukhonza amaklayenti ayo esikhungweni sobuchwepheshe bamamitha square 2000 eCambridgeshire, UK kanye nehhovisi laseSingapore, uMegahertz uyakwazi ukulungisa ngisho nezinhlelo ezinkulu kakhulu futhi enze umqeqeshi wakhe wezimoto.
Njengoba idumela elihle kakhulu kusukela ku-1982, i-Megahertz ngumholi wezwe ozimele ozimele ekuhlanganisweni kwezinhlelo ngokusekelwa okuqinile kwezezimali kanye neminye yezimlando ezimile kunazo zonke embonini kanye nebhizinisi eliphinda liphinda liphindwe kusukela kumakhasimende aphezulu aphezulu njenge-BBC, BT Media & Broadcast, i-Globecast , I-RaceTech, i-Vive TV, i-RT, kanye isb. Ukuze uthole olunye ulwazi, sicela uvakashele www.megahertz.co.uk.
Mayelana ne-Spiritland Productions
I-Spiritland Productions yilezi zengezo ezisha kakhulu ku-brandland ye-Spiritland. Ukuphakanyiswa nguGareth Iles no-Antony Shaw Spiritland Productions banekhono kanye nesipiliyoni sokuletha wonke amashidi weprojekthi ephilayo noma eqoshiwe. Futhi phezu kweminyaka engu-10 yokugcina isebenze emikhosini eminingi emikhulu yase-UK kuhlanganise ne-Glastonbury, Ukufunda ne-BBC Biggest Weekend, ukuxuba izingxenyana ezisemqoka ezigabeni eziyinhloko nezibili.
Njengoba uneminyaka eminingi esebenza emsakazweni omkhulu kunazo zonke ngaphandle kokusakazwa emhlabeni, iMicrosoft Productions manje ingumhlinzeki omkhulu we-Virgin Radio UK futhi iyisiqhema sayo yonke imiklamo ye-Chris Evans ye-Breakfast show ye-ambitious on-location.
I-Spiritland Productions nayo ine-studio ekhulayo e-King's Cross, eLondon namakhasimende afana ne-BBC, Spotify, Facebook, ukubiza amagama ambalwa.
Ukuze uthole olunye ulwazi, ukuze uxoxe ngephrojekthi, noma incwadi ukuza ubone i-Spiritland One isenzo, sicela uvakashele www.spiritlandproductions.com noma i-imeyili [Email protected]
Isiteshi 5 senza lula ukuhamba komsebenzi ngesakhiwo esisodwa - Novemba 25, 2019
I-Royal Opera House ilungiselela ukusakazwa bukhoma kwe-4K nge-Megahertz - Novemba 13, 2019
Cabanga Ezokuxhumana Zivuselela Ubuchwepheshe beCore Truck be-NEP Belgium - Novemba 6, 2019
Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe Ukubambisana ingqalasizinda ye-IP ekugcineni izimo zokusebenza eziguquguqukayo I-Gareth Iles ibc 2019 Jon Flay I-Megahertz Ama-Marcomms we-MKM Ukuxhumana kweMKM Marketing Iloli le-OB eyodwa-of-a-enomusa Ukusakaza Ngaphandle ukukhiqizwa kokuthunyelwe I-Spiritland One I-Spiritland Productions Ubuchwepheshe be-TV I-Ultra HD Forum Umlingisi wevidiyo	2019-07-19
Ngaphambilini: Umsizi weMidiya
Olandelayo: I-Barnfind yokubonisa i-X -UMXG-SDI ne-HDMI ye-12 Fiber Transport BTF2.0-1 Frame ne-Future Future-Proof ukusebenza ku-IBC 41